ahoana no miresaka tovovavy iray eny an-dalambe. (fifandraisana, ny vehivavy, ny ankizilahy) - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Aho ary tsy manana olana aho dia tena saro-kenatra, rehefa manana zazavavy iray izay mirotsaka, foana aho dia fantatro fa tsy fantatrao ny zavatra tiako ho lazaina, izay tsy afaka milaza ny manao soso-kevitra amin'ny ahoana no miditra ilay resaka aho dia te-hanana azy, te-hangataka izany ka manazava ny ao an-tsipirianyTiako ny manontany ny fanontaniana hafa, toy ny momba ny tsara indrindra gilasy fivarotana. Lazao azy ianao anaty tafatafa iray (noho ny Torretta fialan-tsasatra). Ianao te-hahafantatra izay karazana fanontaniana tovolahy iray no hiatrika ny handresy azy ny.
raha toa izy ka ny zavatra, ary izy tsy handao na inona na inona, ka faingàna, na inona na inona dia ho very ihany, ary raha tsy mamaly ny Protocol birao taty aoriana, dia izay mikasika ity fanontaniana ity.
Izany dia efa taona maro lasa izay digressions) na tsy izany ihany. Ianao no tena mbola tanora sy milamin-tsaina, matetika eo ny olona, mikasika ny fahatokiana ny fandresena sy ny hahatsiarovanareo izany foana sy ny fahalalam-pomba fa tsy maintsy mianatra. Ahoana no ahafahako manao izany tsara kokoa noho ny ankizivavy eny an-dalambe izay tsy manana valiny fa matahotra aho na menatra ny? Hello. Maro ny olona mihevitra fa raha ny ankizivavy iray eny an-dalambe mijery sy ianao nitsiky ianao, dia tokony ho faly. Ianao mahita ny tena manaiky aho. Ary raha nanana tovovavy tiako amin'ny Strada, na dia amin'ny antso. Fa amin'ny fomba ahoana? Niteny fotsiny hoe Salama. Lehibe sy mankafy ny fifanakalozan-kevitra fa izao manaraka izao. Misaotra noho ny valin-Hello, te-hanontany raha misy manana torohevitra momba ny fomba afaka mora kokoa ny mandresy ny tovovavy tsara tarehy tao anaty fiaran-dalamby, amin'ny fitondrantena, na fotsiny eny an-dalambe, ny fomba ankizivavy mihetsika. Raha toa ianao girl, tiako ianao, dia ankizilahy iray eo amin'ny anjara namaly izany tamin-katsaram-panahy. Vitsy Volt soso-kevitra. Izaho dia somary saro-kenatra sy taona aho izay manomboka amin'ny teny mendrika sy eo amin'ny fifandraisana amin'ny ankizivavy Hey, izaho ahy sy ny sekoly, nandritra ny fotoana, ny tena tsara ankizivavy, amin'ny tena selchen nahatsikaritra. Efa ny faran'ny herinandro izay nihevitra aho fa amin'ity herinandro ity no mitranga amiko amin'izay fotoana izay, tonga niaraka tamin'ny hevitra ny maka ny fialan-tsasatra, sy ny tsy hamaly. Amin'izao fotoana izao, dia te-hanoratra ny taratasy fampidirana ao amin'ny Facebook, fa tsy izaho no te-hanoratra momba azy io ho toy ny fiarahabana na miarahaba, izaho tsy te-hanoratra na inona na inona Intrusive. Eny, izany no tena tsara tarehy, ary izany aho wow feeling isaky ny mahita ny antony tsy manome izany ho ahy ao amin'ny Facebook na zavatra hafa tsara ny dick tiany. Aho te-hanoratra ny zavatra izay azoko antoka fa mety ho voasoratra ao valiny:"fantatro fa afaka mamaritra ny tenako kely, nefa tsy fantatro izay aho dia afaka miteny ny momba ny tenako.
azonao angamba miaraka amin'ny toro-hevitra vitsivitsy.
izany dia tena zava-dehibe ho ahy raha tsy hanome ahy na inona na inona ny toro-hevitra, ka mety afaka hanome ahy ny sasany torohevitra momba ny fomba hamaliana ahy bebe kokoa noho izy efa mba hivoaka ho gilasy ao amin'ny ririnina Eny, tahaka ny vao manan-tsaina: maniry aho ho afaka hanome ahy misy soso-kevitra aho, tsy te-hanimba azy Misaotra mialoha miaramila trondro aho dia hahazo be dia be ny mampamangy amin'ny ankizivavy ny fomba mahafatifaty na tsara tarehy izy ireo, fa ny ahy, ny hany azoko tanteraka ny resy sy ny tena saro-kenatra ao anatiny na oviana na oviana aho nahita ny vehivavy iray eo amin'ny fiainako, ny resaka foana manomboka amin'ny ahy, alemana mpanao fanatanjahan-tena avy ao amin'ny Oniversiten'i Cologne, ranonorana mpianatra sy ny mpianatra, miara, mitanjaka sy fitafiana ireo ihany koa ny tsy nisaraka.
Izany dia namela.
Misy ankizivavy iray ny Fiangonana Zandriny vondrona izay mpahandro. Saingy tsy haiko ny milaza azy, na raha toa aho tia, na. Aho tena saro-kenatra.
Mankasitraka aho raha misy olona afaka hanome ahy ny sasany torohevitra.
Angamba izy tsy handeha ho gilasy miaraka aminao
Heim, ny tovovavy sy ny vehivavy: Nanarona amin'ny Filahiana na ny firaisana ara-nofo. Ny lehilahy ny ankizilahy: Mahita ny tsindrona zava-maharikoriko na Taitaitra.
Ny zanako lahy (taona maro lasa izay) farany dia tonga ao amin'ny dobo filomanosana amin'ny tovovavy sy nanandrana manoroka ny vadiny, amin'ny fanamarihana ny fomba izy ireo naneho ny heviny avy hatrany ny ao an-trano.
Indrisy anefa, fa isika dia miaina ao amin'ny tanàna kely iray izay tsy tianao ny zazalahy mba hahazo laza noho ny maha-ratsy fanahy. Noho izany, dia mahazo ny zazavavy mba hiteny ankitsirano, izay tsy misy afaka milaza, ary tsy namela azy ho voasazy. Tokony ho niala tsiny izy, dia efa mafy orina mandritra ny iray volana, ary tsy ho ela dia handefa azy ny psikology ao amin'ny manaraka-tanàn-dehibe. Ny hevitra hamahana ny zava-avy amin'ny vadiko aho, dia hanao izany ny tenako, fa noho ny heviny, raha ampy izay. Maniry aho, fotsiny, tsy ny olon-tiany dia tena ratsy fanahy, manantena aho fa ao tsara ny torohevitra ao amin'ny Internet-tsy fantatra ny toe-draharaha: zazavavy tsara tarehy miresaka momba anao, dia hiresaka. Zava-misy: ny Zazavavy tsy tianao aho dia mila ny maro. Manome azy ireo ny fahafahana. Zava-misy: vahiny Tanteraka dia miresaka momba anao eny an-dalambe. Hey ahy aho ary mba te-hanontany hoe ahoana matoky aho araka izay azo atao, toy ny eny an-dalambe, any amin'ny toeram-Pivarotana lehibe na aiza ny voalohany ny tovovavy ny saina na izaho miresaka aminao sy taorian'ny fanontaniana marika) aho tsy milamin-tsaina, fa efa tena matoky ny tenako, fa rehefa mihaona amin'ny tovovavy izay maka izany aho, dia mieritreritra foana ny fomba mangidy izany dia ny manana harona ny vola, ary izany foana toa tahaka ny w r io dia zavatra ratsy kokoa noho ny olona mindrana. (Aho fa tsy ratsy na inona na inona toy ny hoe, tsy mazava tsara amiko, ny eritreritra tonga foana afa-tsy ny raharaha ny fitsabahan'ny). Ahoana no manala ny eritreritra sy ny fahatokisan-tena, rehefa mampiasa). Misaotra anao mialoha.
Dia zara raha mijery toy ny maro hafa, arakaraka Schindler ny lisitra.
Sehatra tovovavy ao amin'ny mena akanjo. Inona izany? Ny sarimihetsika manontolo dia eo amin'ny mainty sy ny fotsy. Inona no tsy maintsy atao amin'ny mena akanjo? Fanentanana momba ny marika. Rehefa dinihina tokoa, ny zazavavy efa nanaporofo ny tenany maty indray. Izy no mitondra zavatra. Tiako ny vehivavy conscript izay mihevitra aho fa dia tsara tarehy, fa tsy mahafantatra ny tsirairay.
Kely aho menatra, ary manana hikarakarana ahy, fampanantenana.
Eny ary, ny fanontaniana dia hoe ahoana no miresaka amin'ny tovovavy sy ny fomba fitondran-tena ny tafatafa tamin'ny fomba toy izany, izay lazaiko ny maro izay voaraiko, indrindra araka izay azo atao mandritra ny tafa sy dinika. Androany aho mandritra ny fetibe, avy eo dia niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny trano-lay izay nisy vondrona nahazo diplaoma.
Saransk Mampiaraka toerana
lahatsary tsara indrindra Mampiaraka chat Mampiaraka manerana izao tontolo izao ny lahatsary video internet tsy misy fisoratana anarana manaitaitra ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka ny vehivavy mba hitsena anao video Fiarahana tamin'ny tovovavy iray maimaim-poana video Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana sy maimaim-poana fisoratana anarana maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat room